ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အတန်ဆုံး မာလာရှမ်းကော
17 Feb 2018 . 4:28 PM
အသားတွေ၊ အပ်မှိုတွေ၊ ကြက်အူချောင်းတွေ၊ အသီးအရွက်တွေအပြည့်နဲ့ လူ၃ယောက်စားလောက်အောင် ဝတဲ့ မာလာရှမ်းကောတစ်ပွဲ ၄၉၀၀ ကျပ်ဆို ယုံကြပါ့မလား?
အရသာကလည်း ထိပ်တန်းနာမည်ကြီး ဆိုင်တွေကိုမီတဲ့အပြင် ဈေးက ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ ၂ခါပြန်မေးယူရအောင် အရသာကောင်းလွန်းတဲ့ မာလာရှမ်းကောဆိုင်တစ်ဆိုင် ကျောက်မြောင်းမှာ ဖွင့်လိုက်ပြီနော်။
မာလာရှမ်းကောဆိုတိုင်း ၃ယောက်လောက်စားပြီးတာနဲ့ ပိုက်ဆံသောင်းချီပေးလိုက်ရတဲ့ ဆိုင်တွေကို ခနလေးနားပြီး ဒီဆိုင်လေးဘက် ခြေလှမ်းလှည့်ကြည့်လိုက်နော်။
ကျောက်မြောင်း သတိပဌာန်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ ဒီဆိုင်လေးက မာလာရှမ်းကောကို အဓိကထားရောင်းပြီး တခြားအစားအစာ တချို့နဲ့ အအေးတို့ကို ရောင်းချပေးနေတာပါ။
ကျောက်မြောင်းမှာ မာလာရှမ်းကောဆိုင်ရှားတဲ့ အပြင် အပြင်အဆင်လှလှလေးနဲ့ အေးဆေး အနားယူလို့ရမယ့်ဆိုင်ဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ရတာမို့ မာလာရှမ်းကောFan အတွက် တကူးတက အဝေးကြီး Center တွေမှာ သွားစားရတဲ့အခြေအနေကနေ လွတ်ပြီပြောလို့ရပါပြီ။
ဆိုင်လေးက ခုံတန်းလေးတွေနဲ့ ၂ခြမ်းခွဲထားပြီး မျက်နှာကျတ်တစ်ခွင်လုံး အသည်းပုံစာတန်းတွဲလေးတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတော့ ရိုနေပါရောလေ။ လူရှုပ်ကားရှုပ်တဲ့ သတိပဌာန်လမ်းမှာဆိုတော့ ကားပါကင်အတွက်တော့ နည်းနည်းလေးအခက်တွေ့နိုင်ပေမယ့် လာရကျိုးနပ်တဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲမှာ ပါမှာ အသေချာပါ။
သူ့ဆိုင်မှာ မာလာရှမ်းကောကို Set နဲ့ဆို ၄၉၀၀ တန်ရယ် ၁၂၀၀၀ တန်ရယ် ၂မျိုးခွဲရောင်းပြီး ပုံမှန်ဆိုင်တွေလို ကိုယ်ကြိုက်သလောက် Gram နဲ့လဲ စားလို့ရပါတယ်။ အကြံပေးချင်တာကတော့ Set နဲ့ က ပိုပိုတန်နေတာပါ။ ကိုယ်စားခဲ့တဲ့ အစားအစာတွေဆို
မာလာရှမ်းကော Single Set
ကြက်၊ဝက် ၂မျိုးနဲ့ ရပြီး အထုံအစပ် ကြိုက်သလိုပြင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းသွားတော့ Single Set ဆိုပြီး တစ်ယောက်စာပဲမှာလိုက်မိတာ လာချပေးတဲ့အချိန်မှ ကိုယ့်မှာ ၃ခါ ပြန်မေးလိုက်ရပါတယ်။ ပုံမှန်မာလာရှမ်းကော ပန်းကန်လုံးအမောက်ကြီးကို အသားတွေ၊ အရွက်တွေအပြည့်နဲ့ ၃ ယောက်လောက်စားရမယ့် ပမာဏနဲ့ရောက်လာတာပါ။ အသားတော်တော်များပါတယ်။ အရသာဆိုရင်တော့ ဒီဈေးနဲ့ ပေးလိုက်ရတာ တန်လွန်းတယ်ဆိုတဲ့ အရသာတော်တော်ကောင်းကောင်းကို စားရတာပါ။ အဲ့တစ်ပွဲပမာဏက ပုံမှန်ဆိုင်တွေမှာ ၂သောင်းလောက် ပြေးမလွတ်တဲ့ ဈေးပါ။ တန်လွန်း အရသာရှိလွန်းပါတယ်။ စားခဲ့ကြပါ။
ပုစွန်ကို တန်ပူရာအနှစ်လေးတွေနဲ့ ကြော်ထားပြီး အပေါ်က Mustard Sauce အစပ်လေးဆမ်းပေးထားတာကိုမှ ကော့တေးခွက်လေးနဲ့ လာချပေးတယပါ။ သူ့တစ်ဆိုင်တည်းရဲ့ Signature Food မို့ သူ့ကိုလည်း စားခဲ့စေချင်ပါတယ်။ ဆိမ့်ဆိမ့်စပ်စပ်လေးပါ။ သူကတော့ ၄၀၀၀ ကျပ်။ ဈေးလေး နည်းနည်းလေး ပေးရတယ်။
dynamite prawn tempura
မာလာရှမ်းကောလေးကို ထမင်းနဲ့စား၊ အီလာစပ်လာရင် တွဲဖက်သောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ Soda နဲ့ Juice အစုံလည်းရပါသေးတယ်။
တခြား ပြောင်းဖူးထောင်း၊ သင်္ဘောသီးထောင်း၊ ပဲကြာဆံသုပ်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အစားအစာလေးတွေကိုလည်း တော်တော်တန်တဲ့ဈေးနဲ့စားနိုင်တာမို့ ကျောက်မြောင်းထဲနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ နိဗ္ဗာန်တစ်ခုရသလို အေးဆေး ထိုင်လို့ စားသောက်လို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တိုးလာပြီလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Service ပိုင်းမှာလည်း နွေးထွေးတဲ့ဆိုင်လေးပါ။
ဆိုင်နာမည်လေးက “Spice Up” ပါ။ အမှတ် ၇၇ သတိပဌာန်လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း တာမွေမှာပါ။ ပုံမှန်ဆို မနက်ခင်း ၁၀ နာရီကနေ ည ၉ နာရီအထိ ဖွင့်ပါတယ်။၁၆.၂.၂၀၁၈ ကနေ ၁၈.၂.၂၀၁၈ ထိ လမ်းထဲမှာ တရားပွဲရှိတာမို့ အဲ့၂ရက်တော့ မနက် ၁၀ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီထိပဲ ဖွင့်ပါတယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် သတင်းကောင်းလေးက ၁၈ ရက်နေ့ထိ သွားစားတဲ့သူတိုင်းကိုတော့ Check In ဝင်ပေးရုံနဲ့ ၁၅% Discount ထပ်လျော့ပေးနေတာဆိုတော့ မာလာရှမ်းကောတစ်ပွဲကို ၄၀၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ ၃ယောက်လောက် စားလို့ရနေပြီနော်။ ဈေးနှုန်းတစ်ခုတည်းနဲ့တင် မက်မက်စက်စက်စားပျော်သွားပြီမို့ အစားအတွက် ပိုက်ဆံတွေအများကြီး ဖြုန်းစရာမလိုတော့ဘဲ သာယာတဲ့ မာလာရှမ်းကောနေ့ရက်တွေကို နေ့တိုင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီတဲ့ရှင်။
ရနျကုနျမွိ့ရဲ့ အတနျဆုံး မာလာရှမျးကော
အသားတှေ၊ အပျမှိုတှေ၊ ကွကျအူခြောငျးတှေ၊ အသီးအရှကျတှအေပွညျ့နဲ့ လူ၃ယောကျစားလောကျအောငျ ဝတဲ့ မာလာရှမျးကောတဈပှဲ ၄၉၀၀ ကပျြဆို ယုံကွပါ့မလား?
အရသာကလညျး ထိပျတနျးနာမညျကွီး ဆိုငျတှကေိုမီတဲ့အပွငျ ဈေးက ဟုတျမှဟုတျရဲ့လားလို့ ၂ခါပွနျမေးယူရအောငျ အရသာကောငျးလှနျးတဲ့ မာလာရှမျးကောဆိုငျတဈဆိုငျ ကြောကျမွောငျးမှာ ဖှငျ့လိုကျပွီနျော။
မာလာရှမျးကောဆိုတိုငျး ၃ယောကျလောကျစားပွီးတာနဲ့ ပိုကျဆံသောငျးခြီပေးလိုကျရတဲ့ ဆိုငျတှကေို ခနလေးနားပွီး ဒီဆိုငျလေးဘကျ ခွလှေမျးလှညျ့ကွညျ့လိုကျနျော။
ကြောကျမွောငျး သတိပဌာနျလမျးမပျေါမှာရှိတဲ့ ဒီဆိုငျလေးက မာလာရှမျးကောကို အဓိကထားရောငျးပွီး တခွားအစားအစာ တခြို့နဲ့ အအေးတို့ကို ရောငျးခပြေးနတောပါ။
ကြောကျမွောငျးမှာ မာလာရှမျးကောဆိုငျရှားတဲ့ အပွငျ အပွငျအဆငျလှလှလေးနဲ့ အေးဆေး အနားယူလို့ရမယျ့ဆိုငျဆိုတာ လကျခြိုးရလေို့ရတာမို့ မာလာရှမျးကောFan အတှကျ တကူးတက အဝေးကွီး Center တှမှော သှားစားရတဲ့အခွအေနကေနေ လှတျပွီပွောလို့ရပါပွီ။
ဆိုငျလေးက ခုံတနျးလေးတှနေဲ့ ၂ခွမျးခှဲထားပွီး မကျြနှာကတျြတဈခှငျလုံး အသညျးပုံစာတနျးတှဲလေးတှနေဲ့ ပုံဖျောထားတော့ ရိုနပေါရောလေ။ လူရှုပျကားရှုပျတဲ့ သတိပဌာနျလမျးမှာဆိုတော့ ကားပါကငျအတှကျတော့ နညျးနညျးလေးအခကျတှနေို့ငျပမေယျ့ လာရကြိုးနပျတဲ့ ဆိုငျတဈဆိုငျထဲမှာ ပါမှာ အသခြောပါ။
သူ့ဆိုငျမှာ မာလာရှမျးကောကို Set နဲ့ဆို ၄၉၀၀ တနျရယျ ၁၂၀၀၀ တနျရယျ ၂မြိုးခှဲရောငျးပွီး ပုံမှနျဆိုငျတှလေို ကိုယျကွိုကျသလောကျ Gram နဲ့လဲ စားလို့ရပါတယျ။ အကွံပေးခငျြတာကတော့ Set နဲ့ က ပိုပိုတနျနတောပါ။ ကိုယျစားခဲ့တဲ့ အစားအစာတှဆေို
မာလာရှမျးကော Single Set
ကွကျ၊ဝကျ ၂မြိုးနဲ့ ရပွီး အထုံအစပျ ကွိုကျသလိုပွငျခိုငျးလို့ရပါတယျ။ တဈယောကျတညျးသှားတော့ Single Set ဆိုပွီး တဈယောကျစာပဲမှာလိုကျမိတာ လာခပြေးတဲ့အခြိနျမှ ကိုယျ့မှာ ၃ခါ ပွနျမေးလိုကျရပါတယျ။ ပုံမှနျမာလာရှမျးကော ပနျးကနျလုံးအမောကျကွီးကို အသားတှေ၊ အရှကျတှအေပွညျ့နဲ့ ၃ ယောကျလောကျစားရမယျ့ ပမာဏနဲ့ရောကျလာတာပါ။ အသားတျောတျောမြားပါတယျ။ အရသာဆိုရငျတော့ ဒီဈေးနဲ့ ပေးလိုကျရတာ တနျလှနျးတယျဆိုတဲ့ အရသာတျောတျောကောငျးကောငျးကို စားရတာပါ။ အဲ့တဈပှဲပမာဏက ပုံမှနျဆိုငျတှမှော ၂သောငျးလောကျ ပွေးမလှတျတဲ့ ဈေးပါ။ တနျလှနျး အရသာရှိလှနျးပါတယျ။ စားခဲ့ကွပါ။
ပုစှနျကို တနျပူရာအနှဈလေးတှနေဲ့ ကွျောထားပွီး အပျေါက Mustard Sauce အစပျလေးဆမျးပေးထားတာကိုမှ ကော့တေးခှကျလေးနဲ့ လာခပြေးတယပါ။ သူ့တဈဆိုငျတညျးရဲ့ Signature Food မို့ သူ့ကိုလညျး စားခဲ့စခေငျြပါတယျ။ ဆိမျ့ဆိမျ့စပျစပျလေးပါ။ သူကတော့ ၄၀၀၀ ကပျြ။ ဈေးလေး နညျးနညျးလေး ပေးရတယျ။
မာလာရှမျးကောလေးကို ထမငျးနဲ့စား၊ အီလာစပျလာရငျ တှဲဖကျသောကျဖို့ဆိုရငျတော့ Soda နဲ့ Juice အစုံလညျးရပါသေးတယျ။
တခွား ပွောငျးဖူးထောငျး၊ သင်ျဘောသီးထောငျး၊ ပဲကွာဆံသုပျနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အစားအစာလေးတှကေိုလညျး တျောတျောတနျတဲ့ဈေးနဲ့စားနိုငျတာမို့ ကြောကျမွောငျးထဲနတေဲ့သူတှအေတှကျတော့ နိဗ်ဗာနျတဈခုရသလို အေးဆေး ထိုငျလို့ စားသောကျလို့ကောငျးတဲ့ ဆိုငျလေးတဈဆိုငျတိုးလာပွီလို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။ Service ပိုငျးမှာလညျး နှေးထှေးတဲ့ဆိုငျလေးပါ။
ဆိုငျနာမညျလေးက “Spice Up” ပါ။ အမှတျ ၇၇ သတိပဌာနျလမျး၊ ကြောကျမွောငျး တာမှမှောပါ။ ပုံမှနျဆို မနကျခငျး ၁၀ နာရီကနေ ည ၉ နာရီအထိ ဖှငျ့ပါတယျ။၁၆.၂.၂၀၁၈ ကနေ ၁၈.၂.၂၀၁၈ ထိ လမျးထဲမှာ တရားပှဲရှိတာမို့ အဲ့၂ရကျတော့ မနကျ ၁၀ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီထိပဲ ဖှငျ့ပါတယျတဲ့။
ဒါပမေယျ့ သတငျးကောငျးလေးက ၁၈ ရကျနထေိ့ သှားစားတဲ့သူတိုငျးကိုတော့ Check In ဝငျပေးရုံနဲ့ ၁၅% Discount ထပျလြော့ပေးနတောဆိုတော့ မာလာရှမျးကောတဈပှဲကို ၄၀၀၀ ဝနျးကငျြနဲ့ ၃ယောကျလောကျ စားလို့ရနပွေီနျော။ ဈေးနှုနျးတဈခုတညျးနဲ့တငျ မကျမကျစကျစကျစားပြျောသှားပွီမို့ အစားအတှကျ ပိုကျဆံတှအေမြားကွီး ဖွုနျးစရာမလိုတော့ဘဲ သာယာတဲ့ မာလာရှမျးကောနရေ့ကျတှကေို နတေို့ငျး ပိုငျဆိုငျနိုငျပါပွီတဲ့ရှငျ။